देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने
युनिक एफएम रुकुम, कार्तिक १२ । रुकुम सहित आज देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ । आज मध्य र पश्चिमका क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो । पश्चिमी वायुसँगै अरब सागरमा न्यूनचापिय क्षेत्र विकास भएकाले देशभरको मौसम बदली भएको हो । अरब सागरमा विकसित न्यूनचापिय क्षेत्र विस्तारै पूर्वतर्फ सर्दै गरेकाले पूर्वमा पनि झरी पर्ने मौसमविद पौडेलले बताउनुभयो । ...
दिनभर झरी परेपनि हिजोको तुलनामा आज कम पानी पर्ने
साउन,२३– काठमाडौं लगाएतका देशका धेरै ठाउँमा आज बिहानैदेखि पानी परेको छ । दिनभर झरी परेपनि हिजोको तुलनामा आज कम पानी पर्ने जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मौसमविद् सुवास रिमालका अनुसार दिनभरी ठूलो पानी पर्ने संभावना कम रहेको छ । तर सुदूर पूर्वका केही ठाउँमा भने बेलुकीपख ठूलो पानी पर्नेे अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धनकुटा र इलाम आसपासका ...
पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा मुलुकका अधिकांश खेती योग्य जमिनमा धान रोपाई हुन सकेन
साउन,१२– पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा मुलुकका अधिकांश खेती योग्य जमिनमा धान रोपाई हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६७ प्रतिशत जमीनमा मात्रै धान रोपाई भएको छ । मन्त्रालयका पबक्ता उदय चन्द्र ठाकुरका अनुसार सबै भन्दा बढी सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ९७.२ प्रतिशत जमिनमा रोपाई भएको छ । त्यसैगरी मध्यपश्चिमाञ्चलमा ८०.७, पश्चिमाञ्चलमा ७७. ६, मध्यमाञ्चलमा ५०.६ र पुर्वाञ्चलमा ...
यसवर्षको मनसुनमा पहिलेको वर्ष भन्दा फरक
साउन ,११–यसवर्षको मनसुनमा पहिलेको वर्ष भन्दा फरक ढंगले वर्षा भैरहेको मौसमविदले बताएका छन् । साउनको मध्य भैसक्दा समेत कतिपय ठाउँमा अझै राम्ररी पानी पर्न सकेको छैन । मध्य तराईमा खडेरी परेको छ । कतिपय ठाउँमा भने भारी वर्षा भएको छ । मौसमविद् मिनकुमार अर्यालका अनुसार जलवायु परिवर्तन, बढ्दो वायु प्रदुषण लगायतका कारणले अघिल्लो वर्षभन्दा मनसुन फरक देखिएको हो । अहिले बंगालको खाडी र ...
एक गुच्छाकै ८ लाख, विश्वकै महंगो अंगूर
साउन ,३– सामान्यतया अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन । तर जापानमा पाइने एक गुच्छा अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म लाग्छ नै। यसको मूल्य ८ हजार २ सय अमेरिकन डलर अर्थात् ...
दुई दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन शुक्रबारदेखि कमजोर
साउन,१–दुई दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन शुक्रबारदेखि कमजोर हुने मौसमविदले बताएका छन् । जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा गराइरहेको जलवाष्पयुक्त हावा कमजोर हुँदै गएकाले बेलुकादेखि कम पानी पर्नेछ । तर देशका विभिन्न ठाउँमा सामान्यतया वर्षा भने हुने महाशाखाले जनाएको छ । बितेको २४ घण्टामा पोखरामा सबैभन्दा भन्दा धेरै ३ सय ५ दशमलव ४ मिलिमिटर ...
नेपालका राइस मिलहरुको चर्को शुल्कको कारण चामल आयात बढे
असार,१४–कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालका राइस मिलहरुको चर्को शुल्कको कारण चामल आयात बढेको बताउनुभएको छ । राइका मिलहरुले धान कुटेको शुल्क निकै बढि लिने गरेको कारण सीमा क्षेत्रका किसानहरु भारतकै मिलमा पुग्ने गरेका कारण आयात बढी देखिएको उहाको भनाइ छ । १४ अर्ब रुपैंयाँको धान अपुग भएको भन्दै उहाले हाल नेपालमा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी रुपैंयाँको धान आयात ...
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा : पश्चिम राप्तीमा बाढी
असार ११ - पश्चिमी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएसँगै त्यस क्षेत्र बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा अहिले पनि भारी वर्षा भैरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण पश्चिम राप्तीमा पानी बढेर खतराको संकेत भन्दा माथि पुगेको छ । त्यस क्षेत्रको मौसम बेलुकीदेखि सुधार हुने मौसमविदले बताएका छन् । मौसमविद् ...
जेठ २२ - बुधबार र बिहीबार हल्का पानी परेपछि शितल भएको पश्चिम तराईमा फेरि तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । मौसमविद् समिर श्रेष्ठका अनुसार हिजो अस्ति सक्रिय भएको पश्चिमी वायु निस्क्रिय हुँदै गएकाले पश्चिम तराइमा फेरि तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको हो । उहाँले काठमाण्डू उपत्यका सहित मध्य र पश्चिम क्षेत्रका केही ठाउँमा आज क्षणिक वर्षा हुने बताउनुभयो । पूर्वमा भने मेघगर्जन सहित ...
जेठ २२ - आज विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा लागेकाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । एउटै पृथ्वी, सात अर्ब सपना: दिगो उपभोग, हाम्रो चाहना भन्ने नारा सहित विश्वभर दिवस मनाइदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९७३ जुन ५ तारिखदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले ...
ओखलढुंगा, जेठ २०– ओखलढुंगाका भूकम्प पीडित किसानलाई निःशुल्क धानको बीऊ वितरण सुरु भएको छ । भूकम्पको कारण बीऊका लागि राखिएको धान नष्ट भएका किसानलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निःशुल्क धानको बिऊ वितरण सुरु गरेको हो । विनासकारी भूकम्पबाट किसानले बीऊका लागि छुट्टाएको धान पुरिएकाले ती किसानलाई निःशुल्क बीऊ वितरण गर्न थालिएको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद अधिकारीले ...
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका किसानलाई धानको बीउ निशुल्क
वैशाख २८ – सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्लाका किसानलाई निशुल्क धानको बीउ उपलव्ध गराउने भएको छ । कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले भूकम्पको कारण क्षतिमा परेका सबै जिल्लाका किसानलाई निशुल्क रुपमा बीउ उपलब्ध गराउने तयारी गरिएकोे जानकारी दिनुभयो । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निशुल्क बीउ ...
भूकम्पबाट भक्तपुरमा १६ करोड भन्दा धेरैका पशुपक्षी मरे
भक्तपुर, वैशाख २८ – भक्तपुरमा वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परेर १६ करोड १७ लाख ५ हजार बराबरको पशुपक्षी मरेका छन् । जिल्लामा भूकम्पका कारण १ लाख ४७ हजार ८ सय ४२ वटा पशुपंक्षी मरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख डा. बलबहादुर चन्दले बताउनुभयो । यहाँ पशुभन्दा बढी कुखुरा मरेको छ । जिल्लामा गाई १ सय ३९ वटा, भैसी १३ वटा, बाख्रा २ सय ५८ वटा, भेडाँ ९ वटा, बंगुर २३ वटा, कुखुरा एक लाख ४७ ...
भूकम्पका कारण ८ अर्ब बढिको खाद्यान्य नष्ट : कृषि समिति
वैशाख २७ – कृषि विकास मन्त्रालयले भूकम्पका कारण ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्न नष्ट भएको बताएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले भूकम्पबाट करिब ८ अर्ब ११ करोड ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न नष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्प बढी प्रभावित १४ वटा जिल्लामा मात्र ७ ...
सुर्खेतमा मौसमको पूर्वानुमान गर्ने राडर राखिने
भविष्यमा हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले सुर्खेतमा जल तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचनाहरु दिने आधुनिक मौसम राडार स्थापना गर्ने लागिएको छ ।वीरेन्द्रनगर नगरपालिका २४ को नलखोला सामुदायिक वन क्षेत्रमा राडार राख्नका लागि काम सुरु भैसकेको जल तथा मौसम बिज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले बताउनुभयो । राडरले २ सय किलोमिटर वरीपरीको क्षेत्रमा कहाँ, कुन समयमा कति ...
वातावरण समितिको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सरकारका अन्य चार जना मन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिको बैठकमा उपस्थित हुन अटेरी गरेका छन् । समितिले सोमबारको बैठकमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, शहरी ...
पाँचतारे होटलमा बाख्रा पालनको सेमिनार
काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलको निकै आकर्षक ढंगले सजाइएको हलमा बाख्रा पालन सम्बन्धी गोष्ठी भएको छ । कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न जिल्लामा सानोतिनो लगानी गरेर बाख्रा पाल्ने किसान र किसानलाई बाख्रापालनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । कार्यक्रमका धेरै सहभागी गाउँबाट आएका र अंग्रेजी भाषा तथा आधुनिक प्रविधीमा पहुँच नभएका किसान थिए । तर सेमिनार भने ...
विकट गाउँमा गाँजाको विकल्पमा तरकारी खेती
मकवानपुरको विकट तीन गाविसमा जेटिए राखिएपछि किसानले तरकारी खेती गर्न सुरु गरेका छन् । यसअघि गाँजा र अफिमको खेती गर्ने किसानले जेटिए पाएपछि तरकारी खेती सुरु गरेका हुन् । पहिले तरकारी खेती गर्ने रहर भएपनि उपाय थाहा नहुँदा समस्या भएको बताउने कालिकाटार, भार्ता र नामटार गाविसका किसान अहिले गाउँमा नै खेती गर्न सहज भएपछि यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । उनीहरु अहिले बन्दा, काउली, लसुन, ...